AIMIX Group®တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် - ထုတ်ကုန်များထပ်မံကြည့်ရှုရန်နှိပ်ပါ။
အကြံပြုချက်များ သို့မဟုတ် တိုင်ကြားချက်များ အွန်လိုင်း
Self- Loading ကွန်ကရစ်ရောနှော
Hopper Batching စက်ရုံ
Portable Mixer အကြီး
Twin Shaft ကွန်ကရစ်ရောနှော
ဒေါင်လိုက် Shaft Mixer
Boom Pump ရောင်းရန်
အဆင်သင့်ဖြစ်သော Plaster Plant
Wall Putty ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ
Skim Coat စက်
စာရေးကိရိယာ Asphalt စက်ရုံ
Hot Mix ကတ္တရာစက်ရုံ
အဆိုပါ USA တွင်
Whatsapp ID- + 86 18569987230
WeChat ID- 18569987230
AIMIX GROUP - ဆောက်လုပ်ရေးစက်ပစ္စည်းကုမ္ပဏီ
အသုတ်လိုက်အပင်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုး AIMIX အုပ်စု
အမျိုးအစား: AJ-25 ～ AJ-240
ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် - 25m3 / h – 120m3 / h
ကွန်ကရစ်ရောနှောခြင်း: JS series; SICOMA စီးရီး
အမျိုးအစား: AJS-25， AJL-25， AJW-1000
ကွန်ကရစ်အရောနှောအမျိုးအစား: JS စီးရီးအမွှာရိုးရောနှော, ဂြိုလ်ကွန်ကရစ်ရောနှော, ကွန်ကရစ်ဒယ်အိုးရောနှော, etc
ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် - 50m3 / h – 60m3 / h
ကွန်ကရစ်ရောနှောခြင်း: JZM စီးရီး
pump pump: 30-90 m³ / h
အမျိုးအစား: ရောနှောစုပ်စက်; Towable စုပ်စက်; စန်းစုပ်စက်
ရိနာစွဲ: 1.2-6.5m3 / h
စည်အလှည့် - ၂၇၀ ဒီဂရီ
အဓိကထုတ်ကုန်များ AIMIX အုပ်စု
ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် - ၁၀-၆၀၀ တန် / နာရီ
အမျိုးအစား: စာရေးကိရိယာအမျိုးအစား; မိုဘိုင်းအမျိုးအစား; စည်အမျိုးအစား
အမျိုးအစား: Semi အော်တို; အပြည့်အဝအော်တို
Crusher: မေးရိုးခွဲစက်။ Cone crusher; Impact crusher
(စွမ်းရည် - ၁-၁၀၀၀ တန် / နာရီ)
အရောင်းအ ၀ ယ် AIMIX အုပ်စု
ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရုံးခန်းများနှင့်စက်ရုံများရှိသည်။ တရုတ်၌သာမကဘဲတည်ထောင်သည် LBS စင်တာများ in ပါကစ္စတန်, အင်ဒိုနီးရှား, ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးများ, မေလးရွား, ဥဇဘက်, ရုရှားနိုင်ငံ, စသည်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်သင့်အားလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်
ယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်တို့သည်စက်များကိုအယ်လ်ဂျီးရီးယား၊ အာဂျင်တီးနား၊ သြစတြေးလျ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ၊ ဘီလာရုစ်၊ ဘိုလီးဗီးယား၊ ဘော့ဆွာနာ၊ ဘရာဇီး၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ ကိုလံဘီယာ၊ ကွန်ဂို၊ အီဂျစ်၊ အီသီယိုးပီးယား၊ ဖီဂျီ၊ ပြင်သစ်၊ ဂရိ၊ အီရန်၊ ကာဇက်စတန်၊ ကင်ညာ၊ လာအို၊ လက်ဘနွန်၊ လစ်ဗျား၊ မာလာဝီ, မော်လ်ဒိုက်နိုင်ငံ၊ သီရိလင်္ကာ၊ ဆီးရီးယား၊ ထိုင်း၊ ထရီနီဒက်နှင့်တိုဘာဂို၊ ယူဂန်ဒါ၊ ယူကရိန်း၊ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၊ အမေရိကန်၊ ဗီယက်နမ်၊
ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားအရည်အသွေးရှိသောဆောက်လုပ်ရေးစက်ဖြင့်ထောက်ပံ့နိုင်ရုံမကကြိုတင်ရောင်းချမှု၊ အရောင်း ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ရောင်းပြီးနောက် ၀ န်ဆောင်မှုအပါအ ၀ င်အကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုကိုလည်းပေးနိုင်ပါသည်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမန်နေဂျာကိုစက္ကန့် ၆၀ အတွင်းရောက်ရှိသည်
အတွင်းနည်းပညာဆိုင်ရာ Q & A
ကွန်ကရစ်နောက်တွဲယာဉ်စုပ်စက်ရုရှားနိုင်ငံကြေးဇူးတငျစကား AIMIX ငါတို့ကိုကူညီပါ
ကြေးဇူးတငျစကား AIMIX ကျွန်ုပ်တို့အား 40m3/h ဒီဇယ်အင်ဂျင်ပန့်ကို ရွေးချယ်ရန် ကူညီပေးပါ၊ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပရောဂျက်အတွက် အလွန်သင့်လျော်ပါသည်။
AIMIX အရောင်းသမားသည် အလွန်ကျွမ်းကျင်ပြီး စိတ်ရှည်သည်။ သူမက ကျွန်တော့်ကို အကြံဥာဏ်တွေ အများကြီးပေးတယ်။ ပြီးတော့ ငွေအမြောက်အမြား ချွေတာနိုင်ပါစေ။ အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကွန်ကရစ်နောက်တွဲယာဉ်စုပ်စက်မော်ရိုကိုကွိုဆို AIMIX မော်ရိုကိုသို့
C'est un grand plaisir de သစ္စာဖောက် avec vous. Vous avez fait preuve de professionalisme, de rigueur et de sympathique။ Merci beaucoup encore une fois ။
Les pompes à béton ဒီဇယ် ABT40C sont très efficaces et faciles à utiliser.
ပါကစ္စတန်၊ Lahore မှ လူများစွာသည် ABJZ40C ဒီဇယ်ကွန်ကရစ် ရောနှောပန့်ကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ကြားသိရသည်။
ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် စက်ရုံသို့သွား၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို လေ့လာခဲ့ရာ ABJZ40C သည် ထိရောက်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ပရောဂျက်နှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ AIMIX အရောင်းသမားလည်း ထိရောက်ပြီး ကျွမ်းကျင်ပါတယ်။
အရောင်းသမားများနှင့်အင်ဂျင်နီယာများကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် AIMIX သူတို့ရဲ့လူနာအဖြေတွေကိုနှင့်လမ်းညွှန်သည်။ အခုငါ့ကွန်ကရစ်ထုတ်လုပ်မှုစီမံကိန်းကိုချောချောမွေ့မွေ့အကောင်အထည်ဖော်ပြီးပြီ။
35m3 / h ရောစပ်ရေးစခန်း၊ ABT40C ဒီဇယ်ကွန်ကရစ်စုပ်စက်နှင့်ရောနှောကုန်တင်ကားတို့သည်ပြီးပြည့်စုံသောညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုကိုရရှိခဲ့ကြသည်။
ကွန်ပျူတာထိန်းချုပ်မှုသည်ရိုးရှင်းပြီးအကျိုးရှိသည်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် AIMIX ကျွန်ုပ်၏စီမံကိန်းအတွက်အားလုံးကူညီပံ့ပိုးပါ။
AIMIX GROUP သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ညီဖြစ်သည်။ အင်ဂျင်နီယာသည် ၀ န်ထမ်းများကိုတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ခြင်းတို့တွင်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာသည်စက်ရုံကိုစတင်လည်ပတ်ခဲ့သည်။ ရောစပ်စက်ရုံ၏ထိရောက်သောလည်ပတ်မှုဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံကိန်းကိုမကြာမီပြီးစီးမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
AIMIX အင်ဂျင်နီယာအလွန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပါ! ကျွန်ုပ်တို့၏ site အခြေအနေများအရသူသည်အုတ်စက်တပ်ဆင်မှုကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာစီစဉ်နိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အော်ပရေတာများကိုစိတ်ရှည်ရှည်ဖြင့်လေ့ကျင့်နိုင်သည်။ ကျနော်တို့နှင့်အတူရေရှည်စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးထူထောင်ပါပြီ AIMIX အုပ်စု။
သူတို့ကိုယ်တိုင်တင်ကွန်ကရစ်အရောအနှော ၅ ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ဝယ်ယူခဲ့ကြပြီး၎င်းသည်အလွန်ထိရောက်မှုရှိပြီးအဆင်ပြေသည်။ ထို့အပြင်သူတို့သည်လုပ်ကိုင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။
self loading mixer3.2m3 နှင့် 3.5m3ကာဇက်စတန်
ကြေးဇူးတငျစကား AIMIX GROUP သည်ကျွန်ုပ်တို့အား ALQ80 စာရေးကတ္တရာအပင်ကို ရွေးချယ်၍ တပ်ဆင်ပါ၊ ၎င်းသည်အရည်အသွေးကတ္တရာအရောအနှောကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်ဟုယုံကြည်သည်။ အီတလီ Ebico အမှတ်တံဆိပ်၏မီးစက် AIMIX အသုံးပြုမှုသည်တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိပြီးလောင်စာဆီ ၂၀ မှ ၃၀% ကိုသက်သာစေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုများစွာသက်သာစေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုစိတ်ဝင်စားပါသလား။ ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ပါပုံစံဖြင့်သင်၏စုံစမ်းမေးမြန်းပါ။
Self Loading Mixers များ
မလေးရှားအတွက် ABT80C ဒီဇယ်ကွန်ကရစ်ပန့်မှ ပို့ဆောင်မှုနှင့် တုံ့ပြန်ချက်
အခြောက်အင်္ဂတေ ၃ တန် မလေးရှားနိုင်ငံသို့ တင်ပို့ခဲ့သည်။
မလေးရှားတွင် ကြွေပြားကပ်ခွာထုတ်လုပ်မှုလိုင်း တပ်ဆင်ခြင်း အပြီးသတ်ပါ။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရှိ AJ-90 စာရေးကိရိယာ ခါးပတ် ကွန်ကရစ် ကွန်ကရစ် အသုတ်စက်ရုံ တပ်ဆင်ခြင်း အပြီးသတ်ခြင်း
မတ်လတွင် Uzbekistan တွင် AJ-35 အသေးစား အသုတ်စက်ရုံ တပ်ဆင်မှု အပြီးသတ်ပါ။
အရောင်းဟော့လိုင်း- +၁ ၄၅၀.၇၈၁.၀၁၁၅;
ကုန်တင်ဝန်ဆောင်မှု- + 86 18569982536
China ရုံးလိပ်စာ:၉ လွှာ၊ တရုတ်ပြည်အလယ်ပိုင်းအီးကုန်သွယ်မှုဆိပ်ကမ်းအမှတ် ၆၊ Zhengzhou, Henan, China;
ပါကစ္စတန်ရုံးလိပ်စာ -#37၊ လမ်း 6၊ F8/3၊ Islamabad၊ Pakistan.;
ဖိလစ်ပိုင်ရုံးလိပ်စာစိန့်ပေါလ်လမ်း၊ မကာတီ၊ မနီလာ၊ ဖိလစ်ပိုင်;
ဥဇဘက်ကစ္စတန်ရုံးခန်း:Адресмагазина: Сергелир-н, ул။ ЯнгиСергели, дом12А
အင်ဒိုနီးရှားရုံးလိပ်စာKenary golf 7/NO.11၊ PIK၊ Jakarta၊ Indonesia;
မူပိုင် 2016 @ Aimix Group Co., Ltd။ ဆောက်လုပ်ရေးစက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ
တစ် ဦး Quote တောင်းဆို!